Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo ku kulmay Dhuusamareeb | Caroog News
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe ayaa markii ugu horreysay kulan ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb, tan iyo markii ay qaraxday xiisadda siyaasadeed ee dowladda dhexe iyo Jubaland.
Kulankan oo ka dhacay Xarunta Madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb oo uu degan yahay Madaxweyne Farmaajo, ayaa yimid kadib dadaalo socday tan iyo xalay oo la doonayey in la isugu keeno labada dhinac.
Sida aan xogta ku helnay, kulanka ayaa waxaa kasoo shaqeeyey Ra’iisul Wasaare Kheyre, Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor iyo Madaxweynaha HirShabeelle Waare oo dadaal xooggan u galay sidii labada dhinac ay isku arki lahaayeen ka hor inta aanu furmin shirka guud.
Illaa iyo hadda wax faah-faahin ah lagama hayo kulanka labada dhinac, hase yeeshee dad ku dhow ayaa sheegay inuu u badnaa un niyad wanaag la isku muujiyo ka hor inta aan shirweynaha madaxda federaalka iyo madax goboleedyada la furin.
Waxey aheyd markii ugu horreysay oo ay labadaan masuul si fool ka fool ah isku hor fariistaan tan iyo markii dowladda dhexe ay waxba kama jiraan ku tilmaantay doorashadii uu Axmed Madoobe kusoo baxay ee ka dhacday Jubaland.
Waxyaabaha la filayo in Dhuusamareeb laga diiwaan galiyo waxaa ka mid ah in la xaliyo khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo Axmed Madoobe, taasi oo ah qeyb ka mid ah Caqabadaha ku horgudban furitaanka shirka Madaxda dowladda Federaalka iyo dowlad Goboleedyada.